Ọzọ Desktọpụ Enyi na-akwadoghị site na DeBIAN 10 | Site na Linux
Ọnọdụ Desktọpụ Ọnọdụ ndị ọzọ anaghị akwado DEBIAN 10
Dị ka anyị niile maraworị, na DEBIAN 10 meta-nkesa, bụ otu n'ime ihe ndị kasị ochie, siri ike na ike nke ngụkọta na nke ugbu a set of Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe dị, ọ na-abụkarị na-akwado ndị kachasị ewu ewu ma sie ike Ebe Desktọpụ (DE) mara.
Ka anyị cheta na a Ebe obibi Desktọpụ, abụghị ihe ọzọ karịa set nke software dị mkpa iji nye onye ọrụ ọ bụla nke ụfọdụ Usoro njikwa, a visual, enyi na enyi ụdị nke mmekọrịta. Nke ahụ bụ, ọ bụ mmejuputa iwu nke Eserese eserese eserese (GUI) dị njikere inye mfe ịnweta na nhazi, dị ka ogwe ngwaọrụ na ijikọ n'etiti ngwa, yana arụmọrụ dịka ịdọrọ na dobe, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ihe banyere nke ugbu a DEBIAN GNU / Linux metadistribution, na nke kachasị ọhụrụ mbipute, na nọmba 10, aha koodu Buster, ọ na eze na-akwado echichi na ojiji nke ndị na-esonụ Gburugburu Ebe Obibi: GNOME, KDE Plasma, XFCE, pawuda, MGBE, Lxde y NXT.
Dịka egosiri n'ụzọ doro anya, na onyonyo ahụ ozugbo n'elu paragraf a, site na iji ngwa ahụ Tasksel (Task Selector ma ọ bụ Task Selector). Kedu nke bụ ihe ọ bụla karịa ngwugwu nke na-enye interface dị mfe maka ndị ọrụ chọrọ ịhazi usoro ha site na ịrụ otu ọrụ ma ọ bụ karịa. Enwere ike iji mmemme a mee ihe n'oge nwụnye usoro ma ọ bụ n'oge ọ bụla, iji ma ọ bụ na ọ bụghị, ụfọdụ ntọala mmalite.
1 Ọnọdụ Desktọpụ Ọzọ
1.1 Desktọpụ Deepin
Ọnọdụ Desktọpụ Ọzọ
N'etiti Ọnọdụ Desktọpụ Ọzọ adighi akwado ya DEBIAN 10, ya bu, ejighi ndabara site Tasksel, anyị nwere ike banyere ndị na-esonụ:
Mbadamba Desktọpụ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ DDE bụ a Ebe obibi Desktọpụ emebere ka odi ma obu ihe ndozi nke Chinese Distro mara mma, Deepin. Emeburu nke a site na ọba akwụkwọ GTK, nke kwere ka ịnye ọrụ nke Gnome shei gbasara ya. Mgbe ahụ, m na-etinye ọbá akwụkwọ ahụ Qt5 kama ịsụgharị HTML5.
Ma ugbu a, ọ na-edegharịrị site na iji DTK (Ngwa Ngwa Ngwa) maka imewe nke interface na mmekọrịta ya na Sistemụ, n'ozuzu ya. Ọzọkwa, DDE gụnyere nhazi nhazi nke jikọrọ ntọala sistemụ, ọdịdị, mmelite na nhọrọ maka idide usoro ọpụrụiche. A na-atụ anya na enwere ike ịwụnye ya DEBIAN 10, mgbe e wepụtara mbipute ahụ Dee 20, nke ga-adabere na nke a. Knowmatakwu banyere kwuru Ebe obibi Desktọpụ ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ha na: DDE.
arụsị bụ a Ebe obibi Desktọpụ ekepụtara ka ọ bụrụ nwa afọ ma ọ bụ ndabere nke ngwa ngwa, n'efu na nchekwa North America akpọ Distro, Osiso os. Ihe ejiri mara nkea bu nke di nfe na nke modulu, na agbakwunye ede ya ede kari na asusu Vala na na na ngwa oru GTK3.
Ọ dabeere na GNOME ma ọ na-eji nke ya shei Nke na-eme ka ọ Mkpa ọkụ na ihe minimalist karịa nke a na integrates ọzọ mfe na ngwa ndị ọzọ nke Osiso os dị ka Atụmatụ (n'ọdụ ụgbọ mmiri), Epiphany (ihe nchọgharị weebụ), Icha (nchịkọta ederede dị mfe) ma ọ bụ Birdie (Twitter ahịa). Ọzọkwa, jiri dị ka njikwa window gala, nke dabere na ntamu.
Ọ na-atụ anya na ọ ga-installable on DEBIAN 10, n'ụzọ kwụsiri ike, site na nsụgharị ya ugbu a 5.X (Juno), dakọtara na DEBIAN 10, ebe ọ bụ na mbipute gara aga 4.X (Loki) bụ stably arụnyere na DEBIAN 9. Knowmatakwu banyere kwuru Ebe obibi Desktọpụ ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ha na: arụsị.
Budgie na Desktọpụ bụ a Ebe obibi Desktọpụ kere ka odi nfe ma obu odi mfe, onwe ya ma di mfe iji, Irish distro kpọọ, Solus. Na mgbakwunye, ejiri ya mara ya oge a, siri ike, ọsọ ọsọ, mmiri na customizable.
Na mbụ, ọdịdị ya yiri nnọọ GNOME 2 na / ma ọ bụ MGBE, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iwekota ihe nke Anya y pawuda. Nke a bụ n'ihi, e wukwasịrị ya Gnome nke 3 mana iji ntuziaka site na Gnome nke 2. Taa, ihe zuru ezu juputara na teknụzụ ọhụụ.
Ugbu a, ya anya na ọhụrụ version nke Solus na-echetara interface nke Windows 10. Karịsịa, na usoro nke ala mmanya dị ka ngosi ebe. Tụọ aka na ụfọdụ ndị ọrụ nke Windows ha na-amalite ịkwọ ụgbọala GNU / Linux, ha nwere ike ịba uru nke ukwuu.
Nke 3, Gburugburu Ebe Obibi kwuru, nke a bụ ihe kachasị mfe iji wụnye ya DEBIAN 10, ebe ọ bụ na ha nchịkọta (budgie-desktọọpụ, budgie- *) Ha nọ na ndabara nchekwa nke otu. Knowmatakwu banyere kwuru Ebe obibi Desktọpụ ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ha na: Budgie.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entornos de Escritorios» uzo ozo adighi akwado ya «DEBIAN 10», ụfọdụ nwere ike itinye n'ọrụ ugbu a na ndị ọzọ adịghị, mana nke ga-abịa n'oge na-adịghị anya, ọ nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ọnọdụ Desktọpụ Nke Ọzọ Anaghị akwado DEBIAN 10
Alejandro Garcia onye nhazi ihe oyiyi dijo
Enyi, ikwesiri ikwuputa Atọ n'Ime Otu ụdị kde3 gbanwere na qt3 nke na-ewere usoro iji bụrụ Desktop Environment kpamkpam na-anọghị na kde na mmemme nke ya.
Zaghachi Alejandro Garcia
Ekele Alejandro! Amaghị m ya, n'oge na-adịghị anya, enwere m olileanya ide edemede banyere ya. Daalụ maka ikwu na ama.